तपाइँको बच्चाले पहिलो अंक सिक्न बारेमा हो? हामी "नम्बर 1 देखि 10" को पृष्ठहरु प्रदान गर्दछ, जो पूर्वस्कूल बच्चाहरु प्लेलिस्ट पहिलो नम्बर नजिक लाग्न चाहान्छन। सङ्ख्याको रूपमा वास्तविक संख्याको अतिरिक्त पहिलो-पटक पाठकहरूका लागि रङको पृष्ठमा पाइन्छ। हाइलाइट रङ पृष्ठहरूमा फरक डायनासोरहरू छन्, जुन संख्याको योग पुन: उत्पन्न गर्दछ।
मजाको साथ सिक्न संख्याहरू
हास्यास्पद डिजाइन गरिएका ड्रेगनहरूले संख्यात्मक प्रणालीमा प्रवेश प्रदान गर्दछ, जसले सानो बच्चाहरूको अनुहार पनि मुस्कान बनाउँछ। यदि केटी र केटाहरु फरक रंगमा विभिन्न जनावरहरू पेंट गर्छन् भने गिनती पनि सजिलो हुनेछ। यो कसरी गणित मजा छ!
1 बाट 10 बाट संख्याहरूको पृष्ठहरू रङहरू
हाम्रो रंगीन पृष्ठले संख्यात्मक संख्या नम्बर र शब्दको रूपमा देखाउँछ र एकै समयमा गणना गर्नको लागि जनावरहरूको उपयुक्त संख्या देखाउँछ। यी रंगीन पृष्ठहरूसँग, तपाईंको बच्चाले प्लेसूचीलाई एक देखि दससम्म सिक्न सक्नेछ। लिङ्कमा क्लिक गर्नाले पृष्ठलाई सम्बन्धित रङ पृष्ठ संख्याहरू खोल्नेछ।
पृष्ठ नम्बर / नम्बर 1 रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर2रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर3रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर4रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर5रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर6रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर7रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर 8 रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर9रंग
पृष्ठ नम्बर / नम्बर 10 रंग